ဘေဘီလေးကို ရေခဲမုန့် ကျွေးမလို့လား...... - Hello Sayarwon
ရေခဲမုန့် ဆိုတာက ကလေးရော လူကြီးတွေပါ ကြိုက်တဲ့ အစားအစာပါ။ ချိုချိုလေးနဲ့ ဆိမ့်ဆိမ့်လေး ရောထားပြီး စားလိုက်ရင် မွမွလေးနဲ့ အေးနေတဲ့ ရေခဲမုန့်က ဘေဘီလေးတွေ ပိုကြိုက်မယ်ဆိုတာ အသေအချာပါ။ ဒီလို တွေးမိတာနဲ့အတူ ခေါင်းထဲကို ဝင်လာတာက ဒီလို စားကောင်းတဲ့ ရေခဲမုန့်လေးကို ဘေဘီလေးကို ကျွေးလို့ ရမလား ဆိုတာပါ။
ဒီ မေးခွန်းလေးရဲ့ အဖြေကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ပြောပြပေးထားတာမို့ သေချာလေး ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးကို ရေခဲမုန့် ကျွေးမလို့လား……
ဘေဘီလေးကို အသက် ၆ လပြည့်တဲ့အခါ မေမေ့နို့ အပြင် solid foods တော်တော်များများကို မိတ်ဆက်ပေးရပါတယ်။ ဒါမှလည်း ဘေဘီလေးက လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရရှိမှာပါ။ ဒီလို စပြီး မိတ်ဆက်တဲ့အခါ အာဟာရပြည့်ဝပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တာတွေကိုပဲ မိတ်ဆက်ပေးသင့်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ အာဟာရပြည့်ဝပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တာတွေကို မိတ်ဆက်ပေးမှ ဘေဘီလေးက ကျန်းမာစွာနဲ့ အရွယ်ရောက်ကြီးပြင်းလာမှာပါ။ ဒီလို မိတ်ဆက်ပေးရမယ့် စားစရာတွေထဲမှာ ဘေဘီလေးတွေ ကြိုက်လောက်ပေမယ့် ဘေဘီလေးတွေ လိုအပ်မယ့် အာဟာရစိတ်ချရမှုစံနှုန်းကို မမီတာကြောင့် ရေခဲမုန့်ကတော့ စတင်မိတ်ဆက်ပေးရမယ့် အစားအစာ အုပ်စုထဲမှာ မပါပါဘူး။
ဘေဘီလေးကို ဘယ်အရွယ်မှာ ရေခဲမုန့်စကျွေးရမလဲ…….
ဘေဘီလေးကို အသက် ၁ နှစ်ပြည့်ပြီးမှသာ ရေခဲမုန့်စကျွေးသင့်ပါတယ်။ ရေခဲမုန့်က နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို အခြေခံပြီး ထုတ်ထားတာဆိုပေမယ့် အရမ်းငယ်သေးတဲ့ ဘေဘီလေးတွေက နို့မှာပါတဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်တာ၊ နို့သကြားဓာတ် မစုပ်ယူနိုင်တာကြောင့် ဘေဘီလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ပါ။
အချို့သော စစ်တမ်းတွေအရလည်း ရေခဲမုန့်က အာဟာရ ပါဝင်မှု နည်းတာကြောင့် ဘေဘီလေးတွေ စားသုံးဖို့ မသင့်တော်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဘေဘီလေးကို ၁ နှစ် မပြည့်ခင် ရေခဲမုန့် မကျွေးသင့်တာလဲ……
ရေခဲမုန့်တွေတိုင်းတော့ မဟုတ်ပေမယ့် ရေခဲမုန့် အများစုက တာရှည်ခံပစ္စည်းတွေ၊ အစားအသောက်ထဲ ထည့်တဲ့ အရောင်တွေ နဲ့ အခြားသော ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အရာတွေ ပါဝင်နေသလို သကြားတွေလည်း လွန်ကဲစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို အခြေခံပြီး ထုတ်ထားတာ ဖြစ်တာကြောင့် ဘေဘီလေးတွေရဲ့ အစာခြေစနစ်က ကြေညက်အောင် မလုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် အစာခြေစနစ် ပြဿနာတွေကို ခံစားရနိုင်တဲ့အတွက် ဘေဘီလေးတွေကို ရေခဲမုန့်ကို တတ်နိုင်သမျှ အရွယ်တော်တော်လေး ရောက်မှ ကျွေးသင့်ပါတယ်။
ရေခဲမုန့်က ဘေဘီလေးတွေ ခံတွင်းတွေ့မယ့် အရာတစ်ခုဆိုတာ မှန်ပေမယ့် ရေခဲမုန့်က ဘေဘီလေးတွေရဲ့
သွားနဲ့ ခံတွင်း ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတာ
ဒါကြောင့် ဘေဘီလေးကို ရေခဲမုန့်အစား သဘာဝ သစ်သီးလေးတွေကို ကြိတ်ခြေပြီး smoothies လိုမျိုး လုပ်ကျွေးတာက အကောင်းဆုံး ဖြစ်မှာပါ။
My Baby’s First Ice Cream – When Can It Have? https://www.beingtheparent.com/my-babys-first-ice-cream-when-can-it-have/ Accessed Date 21 September 2021
Is It Safe for Babies To Eat Ice Cream? https://cafemom.com/parenting/can-babies-eat-ice-cream Accessed Date 21 September 2021